Al Shabaab iyo Daacish oo dilalkii Ugu badnaa ka fuliyay Muqdisho…(Akhriso Liiska Dilalka) | Allbanaadir News	Al Shabaab iyo Daacish oo dilalkii Ugu badnaa ka fuliyay Muqdisho…(Akhriso Liiska Dilalka)
Al Shabaab iyo Daacish oo dilalkii Ugu badnaa ka fuliyay Muqdisho…(Akhriso Liiska Dilalka)
Magaalada Muqdisho ee caasimada Dalka Somalia ayaa bishii Shanaad ee May 2018 marti galisay dilalkii ugu badnaa oo loo geystay dadka shacab iyo kuwa la shaqeeya dowlada.
Dilalka bishii May ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa si siman u geystay Xagjiriinta Somalia Al-Shabaab iyo Daacish oo qeyb ka ah dhinacyada ku loolamaaya dhiiga shacabka.
Dilalka bishii May ka dhacay Muqdisho ayaa tirro ahaan dhan 39 dil, waxaana xusid mudan inay jiraan kiisas dilal ah oo aan weli la helin raadraacooda.
Dilalka ugu badan ayaa waxaa loo geystay Askar iyo Shacab, waxa ayna dilalka ugu badan ka dhaceen Degmooyinka Hodan, Xamarweyne iyo Wada jir , Dharkiinleey, Boondheere iyo Degmooyin kale.
HOOS KA AKHRISO DILALKA MUQDISHO KA DHACAY BISHII MAY 2018:
1-May, 1, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa Askari ka tirsan Dowlada ku dilay Koontarool ciidan oo ku yaal Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir.
2-May, 1, 2018, Kooxo ku hubeysnaa bastoolado ayaa Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir ku dilay askari ka tirsanaa ciidamada xasilinta Muqdisho, waxa uuna dilkiisa dhacay xili uu kusii jeeday Hooygiisa.
3-May, 1, 2018, Maleeshiyaad ka tirsan Al-shabaab ayaa Suuqa-bakaaraha ee Degmada Howlwadaag ku dilay Gabar u shaqeyn jirtay Hay’ada Caafimaadka Aduunka Qaramada Midoobey WHO, oo lagu Magacaabi jiray Maryan C/llaahi Maxamuud.
4- May, 2, 2018, Kooxo ku hubeysnaa bastoolado kana tirsanaa al-shabaab ayaa toogasho ku dilay Askari ka tirsanaa ciidamada Dowladda xili uu ku sugnaa Isgooska Baar Ubax ee magaalada Muqdisho.
5- May, 2, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa magaalada Muqdisho ku dilay Haweeney iibin jirtay qaad, oo ku ganacsan jirtay Isgooska Baar Ubax.
6- May, 3, 2018, Kooxo ku hubeysnaa bastoolado ayaa eeryada Isgooska Sayidka ee magaalada Muqdisho ku toogtay Dable Axmed Jimcaale oo ka tirsanaa ciidamada Militeriga.
7- May 3, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa Degmada Boondheere ee Gobolka ku toogtay wiil lagu magacaabo Cabdullahi xili uu horfadhiyay Maqaaxi ka soo horjeeda Isbitaalka lagu Magacaabo Kulmiye oo ku yaalla degmada Boondheere.
8-May 3, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysna Bastoolado ayaa eeryada Degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho ku dilay Askari ka tirsanaa ilaalada Xarunta Degmada, waxa uuna dilkiisa dhacay xili uu kusii jeeday Hooygiisa.
9-May 5, 2018, Ruux ku hubeysnaa qori AK47 ayaa Degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ku dilay haweeney lagu magacaabi jiray Xaliimo Xuseen Cali Kowshe.
10-May 5, 2018,Nin madaxa looga jiray oo ku hubeysnaa qori ayaa toogasho ku dilay ruux laga magacaabo Maxamed Tuur-yare oo kamid ahaa dadka Degmada Wadajir.
11-May 5, 2018, Ruux hubeysnaa ayaa xaafada sifeeynta badroolka oo ku taalla duleedka degmada wadajir ku dilay Xaawo Maxamuud Caddaan.
12-May 5, 2018, Waxaa magaalada Muqdisho gaar ahaan Degmada Wadajir lagu dilay C/llaahi Maxamed Yalaxow oo kamid ahaa dadka deeganka, waxaana dilay ruux ku hubeysnaa qori.
13- May 7, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa Xaafada Tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka Muqdisho ku dilay nin ka mid ahaa dadka ku nool Xaafadaas, waxaana lagu magacaabi jiray Shooble kana ka mid ahaa ilaalada Jaamacadda Shabeelle.
14- May 10, 2018, Maleeshiyaad ka tirsan Alshabaab ayaa xaafada Seybiyaano ee magaalada Muqdisho ku dilay Askari la sheegay inuu ka tirsanaa Ciidamada NISA xili ay weerar ku qaaden Hooygiisa.
15- May 10, 2018, Kooxo ku hubeysnaa Hubka fudud ayaa Degmada Wadajir ku dilay Askari ka tirsanaa Ciidamada NISA, gaar ahaan kuwa loo yaqaan ‘’Waji-duubta’’ xili uu ku guda jiray fasax shaqo.
16- May 10, 2018, Maleeshiyada al-shabaab ayaa weerar gaadma ah oo ka dhacay xaafada Seybiyaano ee magaalada Muqdisho ku dishay Askari ka tirsanaa Ciidamada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka xili uu ku sugnaa Hooygiisa oo ku yaala isla Xaafada.
17- May 10, 2018, Weerar ay maleeshiyaadka al-Shabaab ku qaaden xaafada Seybiyaano ee Degmada Wadajir ayaa waxaa lagu dilay Askari ka tirsanaa ciidamada NISA ee loo yaqaan Alpha Group.
18- May 10, 2018, Kooxo ku hubeysnaa Bastoolado ayaa Xaafada Seybiyaano ee magaalada Muqdisho ku dilay wiil dhalinyaro ka shaqeynayay Maqaaxi kadib markii uu diiday Mobil laga dhacaayay.
19- May 12, 2018, Rag ku labisnaa dareeska Ciidamada dowladda ayaa toogasho ku dilay wiil dhalinyaro ahaa oo ku sugnaa degmada Dharkenley ee gobolkan Banaadir, gaar ahaan Xaafadda Suuqyaraha, waxa uuna dilka wiilkaasi dhacay kadib markii uu diiday in laga qaato Moobil uu watay.
20- May 14, 2018, Ciidamo ka tirsan Militeriga Dowlada ayaa ruux Mooto Bajaajle ah ku dilay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, waxaana dilka kadib goobta si xarago leh uga baxsaday Gaariga uu la socday Askariga dilka Geystay oo ahaa Cabdi Bile.
21- May 14, 2018, Maleeshiyaad ka tirsanaa Alshabaab ayaa Suuqa Bakaaraha, gaar ahaan Cabdul Shideeye ku dilay Wiil dhalinyaro ahaa oo la sheegay inuu Naafo ka ahaa Gacanta, waxaana dilkiisa kadib ay maleeshiyaadka ka qaateen Muuqaal.
22- May 17, 2018, Askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa qof dumar ah wuxuu ku dilay degmada Hawlwadaag, gaar ahaan xaafadda Ceel-hindi, kadib markii marxuumada iyo Haween kale oo la socday ay ka dul dhaceen Hooy uu ilaalo ka ahaa Askariga.
23- May 18, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa meel aan ka fogeyn Isgooska Shibis ee magaalada Muqdisho ku toogtay Askari ka tirsanaa ciidamada Booliska kaa oo lagu magacaabi jiray Qataatow.
24- May 19, 2018, Kooxo hubeysnaa ayaa qeybo ka mid ah degmada Waaberi ee Gobolkan Banaadir, gaar ahaan meel u dhow Masjidka C/raxmaan Bin Coof ku dilay Ganacsade Sarifle ahaa oo magaciisa lagu soo gaabiyey Aw Aadan, waxa uuna kamid ahaa Ergada soo xushay Xildhibaanada BFS.
25- May 20, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa degmada Yaaqshiid ku dilay mid ka mid ah maamulka Shirkada dhismaha Kulmiye, waxaana dilka kadib goobta ka baxsaday maleeshiyaadka.
26- May 20, 2018, Maleeshiyada al-Shabaab ayaa toogasho ku dilay Sarkaal la sheegay inuu ka tirsanaa Xafiiska Ra’isul wasaaraha Somalia, kaa oo magaciisa lagu sheegay Aweys Cabdi Cumar oo uu dilkiisa ka dhacay Xaafadda Taleex ee Degmada Hodon.
27- May 21, 2018, Kooxo ku hubeysnaa bastoolado ayaa Degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir gaar ahaan halka loo yaqaano Dabaqeynka ku dilay nin magaciisa lagu soo gaabiyay Xasan Sulub oo Kaabe u ahaa dadka loo yaqaano Dalaaleyda.
28- May 21, 2018, Maleeshiyaad hubaysnaa oo ka tirsan Daacishta Somalia ayaa toogasho ku dilay askari ka tirsanaa ciidamada Taraafikada xili uu ku sugnaa nawaaxiga Isgoyska Bakaaraha qaybta xigta dhanka Degmada Hodan.
29- May 24, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa Xaafada Ceelasha-Biyaha ku dilay Askari ka tirsanaa Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka.
30- May 26, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa Suuqa bakaaraha, gaar ahaan eeryada Masjidka Shuhadada ku toogtay wiil dhalinyaro ahaa kaa oo aan la cadeyn waxa uu ahaa.
31- May 26, 2018, Kooxo ku hubeysan Bastoolado ayaa degmada Dharkenley ee Gobolkan Banaadir, gaar ahaan Xaafada suuq Boocle ku toogtay Sarifle lagu magacaabi jiray Maxamed Cali Xariir.
32-May 27, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir ku toogtay Askari naaniistiisa lagu sheegay Caana boore oo ka tirsanaa ciidamada Xoogga.
33-May 27, 2018, Rag ku hubeysnaa bustoolado ayaa waaxda Saddexaad ee Xaafada dabaqeynka degmada Dharkiinley ee Gobolka Banaadir ku diley Nabadoon Caan ka ahaa degmadaas oo lagu magacaabi jiray Nabadoon Saleemaan Abiikar Fooldheere.
34- May 28, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa isgosyka Maana booliyo ee degmada Shibis ee gobolkan Banaadir ku toogtay nin la sheegay in uu ahaa askari ka tirsanaa ciidamada Minashiibiyada.
35- May 28, 2018, Kooxo ku hubeysnaa bastoolado ayaa Waaxda Horseed degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ku dilay Cumar Dhalaxow Muudeey oo ka mid ahaa shaqaalaha Golaha Shacabka, waxaana lagu rasaaseeyay gaarigiisa.
36- May 29, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa degmada Wadajir ee Gobolkan Banaadir, gaar ahaan meel aan ka fogeyn Xarunta Cumar Finish ku dilay Muxudiin Cosoble oo kamid ahaa Ganacsada Hilibka.
37- May 29, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir ku dilay Macalin Dugsi qur’aan oo loogu dhex galay hooygiisa.
38- May 29, 2018, Rag ku hubeysnaa bastoolado ayaa degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir, gaar ahaan nawaaxiga Ansalooti ku toogtay qof shacab ah oo kamid ahaa dadka deegaanka.
39- May 31, 2018, Maleeshiyaad ku hubeysnaa bastoolado ayaa toogasho ku dilay Guddoomiyihii Ururka Dhalinyarada degmada Warta Nabadda (Ex Wardhiigley) Marxuum C/weli Ahmed Mohamed.
Dowlada Somalia ayaa mar waliba ku goodisa inay ka jawaab celineyso dilalkaasi, hase ahaatee waxa ay Hanjabaadaha dowlada u muuqdaan kuwo sii kordhinaaya daadashada dhiiga shacabka.